Waterproof Intelligent Loudspeaker Box, Intelligent Loudspeaker Box, Wireless Intelligent Loudspeaker Box Vanoshambadzira nevatengi muChina
Tsanangudzo:Waterproof Intelligent Loudspeaker Box,Intelligent Loudspeaker Box,Wireless Intelligent Loudspeaker Box,Nzvimbo Inoshandiswa Mvura Inonzwisisika Inzwi Rakanaka Bhokisi,,
Waterproof Intelligent Loudspeaker Box,Intelligent Loudspeaker Box,Wireless Intelligent Loudspeaker Box,Nzvimbo Inoshandiswa Mvura Inonzwisisika Inzwi Rakanaka Bhokisi,,
Zvigadzirwa zve Waterproof Intelligent Loudspeaker Box , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Waterproof Intelligent Loudspeaker Box , Intelligent Loudspeaker Box vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Wireless Intelligent Loudspeaker Box R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
China Waterproof Intelligent Loudspeaker Box Vatengi
Simba rezuva harisi chete rakakwana uye rakavimbika, asiwo rudzi rutsva rwesimba rune ukama hwakanaka hwemamiriro okunze. Iye zvino mishonga yakawanda yemumba yakatanga kushandisa simba rezuva kuti rigadzire magetsi. Inogona kushandiswa semutauri wekunze, kwete chete inogona kushandura zvakajeka simba rezuva kuti rive magetsi, asi rinewo mararamiro emvura, mvura inotyisa, yakasvibirira kushivirira, nezvimwe. Nekunyatsoshandiswa kwezvinhu zve airframe, kunyange pasi pekudzivirira kwezuva rinowedzera kunze ultraviolet chiedza, inogona kunge yakatsva uye inoramba ichitsva. Bluetooth hukama huri nyore.
1. Inonyatsotarisa uye yakasvibiswa wireless mini voice bluetooth speaker
2. Zvishongedzo uye zvinyorwa zvisikwa, zvinotakura uye zvisinganzwisisiki
3. Yakagadzirirwa muTF kadi slot, kutsigira TF kadi kuti iite mimhanzi
Tora hoko yaunogona kuirembera kubva muhomwe yako kuitira kupa basa rako rekunze mimhanzi inonzwa.
5. Pindura foni uye taura foni ne bluetooth. Iyo hurukuro yakagadzirirwa maikorofoni, iyo inogona kushandiswa nyore nyore neyero yezuva
6. Akashongedzwa nemasero ezuva uye akachengetedza rechargeable lithium batteries, inogona kutamba mimhanzi isina mhepo yose pachayo
7. Mobile phone, tablet tablet, MP3MP4 inogona kushamwaridzana, uye zvakasiyana-siyana zvingasarudza kuona pasina utambo mimhanzi kutamba